by admin | Thursday, Apr 14, 2016
Qaadigii wuxuu amray in la xidho odaygii khaa’inka ahaa, wiilkiina la siiyo faraskiisa. Odaygii halkaa ayuu faraskiina ku waayay, xorriyaddiisiina ku waayay oo la xidhay. Maalintaa laga bilaabana khaa’imiintii magaaladu cashar ayay ku qaateen oo waxay ka baqeeen in iyagana la xidho. Maahmaah soomaaliyeed baa tidhaahda: “Booraan hadimo ha qodin, haddaad qoddana ha dheerayn, ku dhici doontaana mooyee.” Taas oo macnaheedu yahay isku dayga aad isku daydo inaad qof hadimayso, ama haddii aan si kale u idhaahdo inaad qof walaalkaaya dhibaatayso, hubaal waxa la arkaa inay kula go’do oo aad adigu dabinkaad u dhigtay ku dhacdo. Mid ka mid ah xaqiiqooyinka nolosha ayaa ah qofka daacad yahanka ah in uu khasaarin, ee uu guulaysato. Waa na halka ay ka timid maahmaahda Soomaaliyeed ee ah: “Daacadi ma hungowdo.”